Ogige Ọzụzụ Ahịa
Gịnị mere Colts gaa n'ogige ọzụzụ? Ọ bụ na ha amabeghị etu esi egwu bọọlụ?
Na July 30th nke afọ a ndị Colts ga-aga Ogige Ọzụzụ, nke a ga-egosi mmalite nke izu anọ nke omume siri ike ezubere ịmanye ndị egwuregwu ka ha lekwasị anya n'ihe ha kwesịrị ime iji mee ka ikike ha nwere ịgba bọl. Mana ọ dị ka igbu oge m, mgbe ọtụtụ n'ime ndị egwuregwu a ejirila opekata mpe afọ 8 ikpeazụ nke ndụ ha na-arụ ọrụ aka ha na egwuregwu asọmpi asọmpi na ndị Colts enweela mmeri karịa ndị otu ọkachamara ọ bụla n'oge a. Kedu ihe n'ụwa ndị a nwere ike iche na ha ga-amụ?
Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, na ụbọchị mbụ nke ogige ahụ, ọ ga-abụ na ha ga-anụ Vince Lombardi a ma ama na-ekwu na ọ fọrọ nke nta ka ndị nkuzi niile malite ịmalite ọzụzụ. "Lemmụ nwoke, nke a bụ egwuregwu bọọlụ." Mmalite a na-egosi ndị egwuregwu niile n'ọhịa na ịga nke ọma n'egwuregwu bọọlụ, dị ka ihe ịga nke ọma na ire ere, bụ ihe niile gbasara otu echiche zuru ezu na otu na-elekwasị anya na ịme obere ihe ziri ezi na ijide n'aka na ị na-eme ihe ndị bụ isi.
Ka anyị na ndị ahịa anyị na-arụkọ ọrụ, ọ nweghị ihe na-enye afọ ojuju karịa ikiri ka anya ha na-enwu ka ha ghọtara na ọzụzụ na ire ahịa adịghị iche na ọzụzụ maka egwuregwu. Ha na-amata na sistemụ ahụ ha malitere ịmụ abụghị naanị usoro omume, omume na usoro - na mgbe emezuru nke ọma na-eme ka ohere ha mechie azụmahịa na ịkpata ego karịa.
Ha makwaara ihe kpatara ya ọzụzụ bụ usoro na-aga n'ihu, na onye ahịa anyị na-arụ ọrụ na anyị maka 4-6 afọ. Maka na agbanyeghị ka Àgwà, Àgwà na Usoro dị mfe, e nwere ụzọ dị ogologo site n'amaghị ihe ị kwesịrị ịme wee mee ihe ị kwesịrị ịgbanye onwe gị.
Ekwetaghị m na omume ahụ na-eme ka ọ zuo oke, n'eziokwu na bọọlụ na ire ahịa enweghị izu oke. Agbanyeghị, na mpaghara ọkachamara ọ bụla anyị maara na omume ahụ na-enwe ọganihu. Mgbe ị na-ele ahịa ahịa gị, ha na-eme? Site na omume m na-ekwu, ha na-arụ ọrụ iji meziwanye ikike ha ịre ere site na iji nkwado na-aga n'ihu yana ikwugharị na mmụba nke nsonaazụ? Ka ọ bụ na ha na-ahụ ọtụtụ mmadụ ka ha nwere ike, na-enwe olileanya na ihe ha na-eme ziri ezi?
Oge ọzọ ị na - ele Peyton Manning ka ọ na - atụda ihe ga - eme ka ọ bụrụ na ọ ga - adị mfe anọ, ị ga - ahụ na ị ga - akwụsịtụ ma mata na n’ime nkeji ọ bụla Peyton na - egwu n’ọhịa n’oge egwuregwu ọ na - etinye ihe karịrị nkeji iri na ise n’ọhịa. Nke na - eduga m azụ na ajụjụ m, mgbe ị na - ele anya ahịa gị, ha na - eme ya?